अव किताब किन्न धाउनु पर्दैन पसल, 'किताब यात्रा'ले ल्यायो घरमै किताब डेलिभर गरिदिने सुविधा !
ARCHIVE, POWER NEWS » अव किताब किन्न धाउनु पर्दैन पसल, 'किताब यात्रा'ले ल्यायो घरमै किताब डेलिभर गरिदिने सुविधा !
काठमाडौँ - के तपाईं कितावको पारखी हुनुहुन्छ ? किताव किन्न पसल-पसल चाहारीराख्नु भएको छ ? के तपाईं आफुले भनेको किताब नभेटेर तनावमा हुनुहुन्छ ? यदी यस्तो हो भने अव ढुक्क हुनुहोस्, तपाईंको समस्याको समाधान दिन किताब यात्रा बजारमा आएको छ ।
तपाईंको किताबी भोकलाई पूरा गर्ने किताब यात्राको आज एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ । पर्यटन बोर्डको सभा हलमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच विभिन्न साहित्यकार, किताब प्रकाशन गृहका प्रतिनिधि र किताबप्रेमीहरुको उपस्थितिमा किताब यात्राको सुरुवात गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा किताब यात्राको टिभीसी र किताब यात्रा डटकमसमेत उद्घाटन भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न साहित्यकारहरुले किताब यात्राले पुस्तकका पाठक, प्रकाशन गृह, र सर्जकको बीचमा पुलको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न वक्ताहरुले किताब यात्राको सुरुवात गर्ने युवाहरुको समूहलाई समेत बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् ।
किताब यात्राका अध्यक्ष ऋषि राम अधिकारी अर्थ सरोकार डटकमका पूर्व सम्पादक हुन् ।